इरफान खान गुमाएकाे २४ घण्टा नबित्दै अर्का चर्चित बलिउड अभिनेता ऋषि कपुरको निधन — Imandarmedia.com
इरफान खान गुमाएकाे २४ घण्टा नबित्दै अर्का चर्चित बलिउड अभिनेता ऋषि कपुरको निधन
काठमाडौं । इरफान खान गुमाएकाे २४ घण्टा नबित्दै भारतले अर्का चर्चित बलिउड अभिनेता ऋषि कपुरलाई पनि गुमाएको छ । कपुरको ६७ वर्षको उमेरमा बिहीबार निधन भएको छ । क्यान्सरबाट पीडित ऋषि कपुर अस्वस्थ भएपछि बुधबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । अभिनेता अमिताभ बच्चनले पनि कपूरको मृत्युको पुष्टि गरेका छन् । उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘उनी गए.. ऋषि कपूर… गए..अहिले भर्खर बिते…म विक्षिप्त भएको छु ।’
ऋषिले जीवनकालभर ९२ फिल्ममा रोमान्टिक रोल निर्वाह गरे । जसमध्ये ३६ फिल्म बक्स अफिसमा हिट भए । तर, ‘शर्माजीकी नम्किन’ को भने छायांकन अधुरै रहयो । उनको ‘खुल्लम खुल्ला : द ऋषि कपुर अन्सेन्सर्ड’ बायोग्राफी प्रकाशित छ । बुधबार मात्रै बलिउडले उम्दा कलाकार इरफान खानलाई ५३ वर्षको उमेरमा गुमाएको थियो ।
फेरि कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट भेटियो, डेल्टा भेरियन्टजस्तै खतरनाक रोग
एकाएक भारतले किन गर्यो यस्तो घोषणा ? बिस्शोभर तरङ्ग
ह’ति’या’रधारीको आ’क्र’म’ण, कम्तीमा १३२ जनाको मृत्यु
ट्रम्पको फेसबुक एकाउन्ट थप दुई वर्ष सस्पेन्ड किन भयो ? यस्तो छ कारण
विश्वभर संक्रमितभन्दा निको हुने बढ्दै, १५ करोड ६२ लाखले जिते कोरोना